တရားပွဲအလှူ အတွက် နိုးဆော်အသိပေးခြင်း - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
တရားပွဲအလှူ အတွက် နိုးဆော်အသိပေးခြင်း
လှိုင်ကျော်ထွေး မှ ဇူလှိုင် 14, 2015 6:59pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လာမည့် ၂၀၁၅ ခုဆိုရင် တရားစာပေများ ရေးသားဖြန့်ဝေဆွေးနွေးရာ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဝက်ဆိုဒ် (www.buddhismworld.ning.com) သည် သက်တမ်းအားဖြင့် (၄) နှစ်ပြည့်ပါမည်။နှစ်စဉ်မပျက် ဆင်နွှဲကျင်းပလာခဲ့သည့် ဆိုဒ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အလှူပွဲကိုလည်း လာမည့် ၂၀၁၅ ခု ၊ ၃ လပိုင်းတွင် ကျင်းပပေးပါမည်။
ယခု ဆိုဒ်(၄) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အလှူကိုတော့ ယခင် နှစ်များနဲ့မတူ ထူးခြားစွာဖြင့် (၄)ည တရားပွဲုကို ကျေးရွာဒေသတခုမှာ မတည်လှူဒါန်းမှု ပြုပေးပါမည်။သာသနာအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများတွင် တက်စွမ်းသမျှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆိုဒ်ကိုယ်စားပြုအဖြစ် “ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတအသင်း” ကို ဖွဲ့စည်းစဉ်ကပင် တရားပွဲများ မတည်လှူဒါန်း ကျင်းပပေးရန် ဆိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်(၁)ချက် ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ကျင်းပပေးနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေမရှိသောကြောင့် စိတ်ကူးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရ၏။
ယခု အသင်းသက်တမ်း (၃) နှစ်ပြည့်မြောက် အချိန်အခါမှာတော့ အသင်းသူ-အသင်းသား၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ၊ဆိုဒ်တွင်း-ဆိုဒ်ပြင် ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းရဲ့ သဒ္ဓ့ါအားနဲ့ တရားပွဲအလှူကို ပုံဖေါ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါ၏။တရားပွဲကျင်းပပေးရာ ကျုံပျော်မြို့နယ် ၊ သောင်ကြီးကျေးရွာသည်..ရန်ကုန်မှ မိုင်(၁၀၀)၀န်းကျင်ဝေးပါသည်။ အသင်းသူ-အသင်းသား ဓမ္မမိတ်ဆွေအများစု စုဝေးရာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ တရားပွဲထည့်သွင်းကျင်းပပေးပါက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသော်လည်း တကူးတကအပင်ပန်းခံ၊ အခက်အခဲတချို့ကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာ၍ ကျေးလက်တောရွာ ဒေသတခုမှာ တရားပွဲသွားရောက်မတည်လှူဒါန်းခြင်းမှာ အကြောင်းရှိပါ၏။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာက ဟိုဘက်ရပ်မှာ တရားပွဲ ၊ ဒီဘက်ရပ်ကွက်တရားပွဲ ၊ ဟိုဘက်လမ်းတရားပွဲ ၊ ဒီဘက်လမ်းတရားပွဲနဲ့ တရားပွဲတွေက မနာယူချင်မှအဆုံး အတော်ပေါလှပါတယ်။ မြို့ဝန်းကျင် နေသူများအတွက်တော့ အလွယ်တကူတရားနာယူခွင့် ရှိကြပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသများမှာတော့ “ငါတို့ရွာမှာ တရားပွဲရှိတယ်ဟေ့” ဆိုသော အသံ တစ်နှစ်နေလို့တစ်ခါ ၊ နှစ်နှစ်နေလို့တစ်ခါ ကြားခွင့်မသာလှပါဘူး။ နာမည်ရ-နာမည်ကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ တရားကိုမျက်မြင်ဒိဌိ နာယူခွင့်ရဖို့ သူတို့အဖို့မှာ အတော်ခက်ခဲ့လှပါတယ်။ ဒါကြောင့်မှို့ ဆိုဒ်(၄) နှစ်ပြည့်မြောက် တရားပွဲအလှူကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထားက တမင်အပင်ပန်းခံကာ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတရားပွဲအလှူကိုလည်း အားလုံးသော ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း၏ တက်စွမ်းသည့်ဘက်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အခတ်အခဲမရှိ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေးနိုင်မည်ဟု အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါသည်။
တရားဒေသနာများ ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူကြမည့် ဆရာတော်များမှာ.....
၁။ ကျိူ က္ကလော့ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဒေါက်တာစန္ဒာဝရာဘိဝံသ ၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ၊၁၃၇၆ ခု ၊တန်ခူးလဆန်း ၇ ရက် ၊ကြာသပတေးနေ့ ။(၂၆ . ၃ . ၂၀၁၅)
၂။ ဘဒ္ဒန္တအရှင် ဣန္ဒက (တွံတေးဆရာတော်) ၊ ၁၃၇၆ ခု ၊ တန်ခူးလဆန်း ၈ ရက်သာကြာနေ့ ။
(၂၇ . ၃ .၂၀၁၅)
၃။ ဘဒ္ဒန္တ ပညာဝံသ (၀ါးခယ်မဆရာတော် ) ၊ ၁၃၇၆ ခု ၊ တန်ခူးလဆန်း ၉ ရက် ၊ စနနေ့။ (၂၈ . ၃ . ၂၀၁၅ )
၄။ ဘဒ္ဒန္တ ပညာဝံသ (၀ါးခယ်မဆရာတော် ) ၊ ၁၃၇၆ ခု ၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၀ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့။ (၂၉ . ၃ . ၂၀၁၅ )
ပါဝင်လှူ ဒါန်းလိုက အောက်ပါအကျိုးတော်ဆောင်များထံ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျားးးးးးးးးး
(၁) မနီလာ (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 095161478
(၂) မဇင်မာညို (လားရှိုး-ရှမ်းပြည်)
ဖုန်းနံပါတ် - 09403727975
(၃) မအေးသီတာ (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 09420011104
(၄) မ၀ါဝါမြင့် (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 095197870
(၅) မဖြူဖြူသီ (ရန်ကုန်)
(၆) မနန်းယု (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 0931597694
(၇) မဇင်မာဦး (ပဲခူး)
ဖုန်းနံပါတ် - 09250159113
(၈) မခင်မို့မို့ဝင်း (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 09316300272
(၉) မဆုမွန်ထွေး (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 09420188860
(၁၀) မသဇင်ဝင်း (တာချီလိတ်)
ဖုန်းနံပါတ် - 0931411347
(၁၁) မသူဇာအေး (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 09420010771
(၁၂) ကိုကောင်းမြတ်ဇော် (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 0950189681
(၁၆) ကိုအောင်ဇော်ဟိန်း ( မုံရွာ)
ဖုန်းနံပါတ် - 09420149666
(၁ရ) ကိုလှိုင်ကျော်ထွေး (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် - 0931543530
မှတ်ချက်။ ။ဟောကြားတော်မူမည့် တရားခွေများကိုလည်း ဓမ္မဒါနလက်ဆောင်မွန်ပြုပေးပါမည်။(ပါဝင်လှူ ဒါန်းသူဖြစ်စေ/အကြောင်းမညီညွတ်လို့ ပျက်ကွက်ခဲ့သူဖြစ်စေ) မည်သူ့ကိုမဆို အခွေအကန့်အသတ်မရှိ ဓမ္မဒါနပါမည် အလိုရှိသလောက် ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါ၏။ ရပ်နီး-ရပ်ဝေး(ပြည်ပမှကြွင်း၍) မြို့နယ်များအထိပါ အိမ်တိုင်ရာရောက်မဟုတ်သော် အနီးစပ်ဆုံးအထိ ကြိုးစားပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည် မတ် 23, 2015 က 5:11pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အလှူရှင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ် Myanmar Foreign Trade Bank ( M F T B ) ရှိ ဓမ္မမိတ်ဆွေ တစ်စု မှ လှူဒါန်းငွေကျပ် - ၂၅၀၀၀/-
အလှူရှင် ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်မေနှင်းကြူ မိသားစု မှ လှူဒါန်းငွေကျပ်- ၃၀၀၀၀/-
အလှူရှင် ဒေါ်အမာစိန် မှ လှူဒါန်းငွေကျပ်- ၅၀၀၀/-
အလှူရှင် ဒေါ်တင်တင်သောင်း မှ လှူဒါန်းငွေကျပ်- ၃၀၀၀/-
လှိုင်ကျော်ထွေး သည် မတ် 23, 2015 က 5:10pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အလှူရှင် မခင်မို့မို့ဝင်း နဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း များမှ လှူဒါန်းငွေကျပ် - ၈၀၁၀၀/-
အလှူ ရှင် ကိုဝင်းနိုင် + မနီ မိသားစုမှ အလှူတော်ငွေ S$ 50 လှူဒါန်း ပါသည်။
အလှူ ရှုင် ကိုခင်မောင်ဦး (ခ) ကို Aaron မှ အလှူ ငွေ S$ 50 ထပ်မံ လှူ ဒါန်း သဖြင့် စုစု ပေါင်း အလှူတော်ငွေ S$75 လှူဒါန်း ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည် မတ် 18, 2015 က 6:58pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အလှူ ရှင် မတင့်ဖြိုးလွင် မှ လှူ ဒါန်းငွေကျပ်- ၅၀၀၀/-
အလှူ ရှင် မယဉ်ယဉ်စန်း မှ လှူ ဒါန်းငွေကျပ်- ၅၀၀၀/-
အလှူ ရှင် ဦးမောင်ဝင်း မှ လှူ ဒါန်းငွေကျပ် - ၅၀၀၀/-